Bitootessa 22, 2017
Yunivarsitii of Saawuzern Kaalifoorniyaa yokaan Yunivarsitii Kaalifoorniyaa Kibbaa Keessatti, waggaa waggaadhaan, Kora Dinagdee Afrikaa tu geggeessama. Kora kana irratti jiloota biyyoota Afrikaa tii dhufan hedduu tu hirmaata. Korri dinagdee Afrikaa kun, bakka itti namoonni itti wal-baranii quunnamtii uummatanii fi waa’ee hariiroo dinadee Yunaayitid Isteetsii fi Afrikaa mari’atan ture. Garuu, bara kana namni hedduun asitti argamuu akka hin danda’iin dubbatu - Qindeessituun kora kanaa – Meerii Flaawors.
Jiloonni Afrikaa walga’ii dinagdee Afrikaa, ka bara kanaatti hirmaachuuf gara Yunaayitid Isteets dhufuu malan martinuu maaliif akka Viizaa dhorkaman hin beeku – ka jedhan – Mary Flaawors, garuu – waa’ee Viizaa fi imalaa ilaalchisee dhimma wal-falmsiisaa bulchiinsa Prezidaant Traamp jalatti uumameen kan wal-qabate ta’uu mala – shakkii jedhu akka qaban dubbatan. Miseensattii mana-maree duraanii – Dayaan Watson dabalee – miseensota mana-maree Yunaayitid Isteets kan duraanii fi kan ammaatti iyyachuu isaanii illee dubbatanii jiran. Dhimma kana qoratanii hundee isaa baruuf ka carraaqaa jiran tahuu dubbatu - Qindeessitoonni Kora Dinagdee Afrikaa.